तातोपानी नाकाबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात बढ्दो, १ अर्ब २७ करोड राजस्व संकलन - Arthakoartha.com
सिन्धुपाल्चोक, २२ जेठ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको आयात बढेसँगै तातोपानी भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा वनि वृद्धि भएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू चालू आवको यो अवधि (गत सोमवार सम्म)मा रू. १ अर्ब २७ करोड २६ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
उक्त भन्सार कार्यालयबाट गत फागुनसम्ममा रू. १ अर्ब ८ करोड ९५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । गत चैत २६ गतेदेखि अहिलेसम्म रू. १८ करोड ३१ लाख राजस्व असुली भएको राससमा उल्लेख छ । यस्तै जेठको यो अवधिमा रू. १२ करोड ७५ लाख राजस्व उठेको छ ।
केही महिना बन्द रहेको भन्सार कार्यालय गत चैत २६ देखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सो नाकाबाट कोरोना उपचार र परीक्षणसँग सम्बन्धित सामग्री सबैभन्दा बढी आयात भएको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार २६ चैतयता स्वास्थय सामग्री मात्र १ अर्ब ६२ करोड १२ लाखको आयात भएको छ ।
जेम्स एण्ड ज्वेलरी काउन्सिलको पुनर्गठन